Mbatya dzebhazi, Zvipfeko zveMitambo, Kunze Kupfeka Mucheka - Kuanyang
Iko kukuvara kwepasi redu kunokonzerwa nekunyanyisa kwepurasitiki hakugone kudzimwa
Plastiki chigadzirwa chenguva yedu, kunyanya mumakungwa. Mapepa epurasitiki nemabhodhoro ePET akapinda muchimiro chepasi uye akapararira pasirese. Maererano nehuwandu, anenge mamirioni mapfumbamwe ematani epurasitiki zvidimbu zvinowedzerwa mumakungwa gore rega rega. Mukupindura kunetso iyi, kuigadzirisazve panzvimbo yechizvarwa polyester (iyo inoshandisa mafuta mazhinji) ndiyo mhinduro yakanakisa yezvakatipoteredza.
Wuxi Kuanyang Textile Technology Co, Ltd. inonyanya kusimudzira nekushandiswa kwemicheka yemitambo yekunze neyemukati. Mumakore achangopfuura, nekuda kwekunetseka kwepasirese kwekusvibisa kwepurasitiki, kambani yedu iri kuchinjira kumachira akasimba uye akashandiswazve.Tinozvipira kuvaka nharaunda ine hushamwari zvitengeswa zvekutengesa uye zvigadzirwa zvinogoneka. Parizvino, kambani yedu yawana chiziviso cheGRS uye ichiva mutengesi wemachira anovandudzwa.
CHIDZIDZO CATEGORY Bullet FABRIC ITEM NO KWB-2125 Supply Type Make-to-Order Chinyorwa 95% Po ...
CHIKAMU CHIKAMU Sportswear FABRIC ITEM NO KW6402 Supply Type Make-to-Order Chinyorwa 86% ...
CHIKAMU CHIKAMU Sportswear FABRIC ITEM NO KW18-9040 Kupa Rudzi rwekugadzira-ku-Order Chinyorwa ...
CHIDZIDZO CATEGORY Yoga Wear FABRIC ITEM NO KW18-1077 Supply Type Make-to-Order Chinyorwa 8 ...
CHIDZIDZO CATEGORY Swimsuit FABRIC ITEM NO KW-2182 Kupa Rudzi rweMake-ku-Order Chinyorwa 92% N ...
CHIKAMU CHIKAMU Sportswear FABRIC ITEM NO KW-2182 Supply Type Make-to-Order Chinyorwa 88 ...
CHIDZIDZO CATEGORY Mabhachi FABRIC ITEM NO KWS21-1021 Supply Type Make-to-Order Chinyorwa 10 ...
CHIDZIDZO CATEGORY Yoga Wear FABRIC ITEM NO KWC21-4081 Kupa Rudzi rwekugadzira-ku-Order Chinyorwa ...
CHIDZIDZO CATEGORY Yoga Wear FABRIC ITEM NO KWC21-4079 Kupa Rudzi rwekugadzira-ku-Order Chinyorwa ...
Wagadzirira kudzidza zvakawanda
Hapana chinhu chiri nani kupfuura kuona mhedzisiro. Dzidza nezve epilog kuwana
bhurocha remaserura ekuveza. Uye ndangobvunza rumwe ruzivo
Dzokera kune chaicho-mbatya yemavara maitiro ...
Indoor kugwinya-kunzwisisa mumitambo indus ...
Masutu evarume nevakadzi emitambo ...
Trendy yekuwedzera-iyo mamiriro eiyo yoga ...
Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye kusimudzira ...